“VILLAGE VOARA” :: Miandry fandaminana ny fifindran’ireo tra-boina • AoRaha
“VILLAGE VOARA” Miandry fandaminana ny fifindran’ireo tra-boina
Misy lafiny sy pitsopitsony maro no fantatra fa mbola tsy hahafahan’ireo mponin’Ampamarinana izay niala tamin’ny tranony, nanomboka ny alatsinainy lasa teo, mifindra eny amin’ny toerana natokana ho azy ireo eny amin’ny tanàna Voara Andohantapenaka. “Mbola tsy tomombana satria hasiana fanamboarana ny lafiny sasany, toy ny toeram-pidiovana, ny jiro manazava, ny fotoana handraofan’ny fiarabe ny fako sy ny maro hafa alohan’ny hipetrahan’izy ireo eny an-toerana. Jerena avokoa ny fepetra hahafahan’izy ireo mitoetra milamina amin’ireny toerana ireny”, hoy ny tompon’ andaikitra iray eo anivon’ny Birao nasionaly misahana ny loza voajanahary na ny Bngrc, omaly.
Nanomboka nanatanteraka ny fidinana ifotony tamin’ ireo toerana voalaza fa handraisana ireo tra-boina io birao io. Fianakaviana manodidina ny sivy amby efapolo no voafaritra fa zakan’ny eny amin’ny tanàna Voara. “Hisy sivana ny fampidirana azy ireo ka ireo olona tena sahirana no horaisina voalohany”, hoy ny fanampim-panazavana.
Etsy amin’ny INFP Mahamasina sy ao amin’ny kianja mitafo Mahamasina ihany aloha no hitoeran’ireo tra-boina vonjimaika hatramin’ny fotoana hanaterana azy ireo sy hitsinjarana azy amin’ ny toerana misy azy avy. Etsy an-danin’ izany, nisy ny fihaonana teo amin’ny tompon’andraikitry ny Vokovoko Mena malagasy sy ny Bngrc, omaly . Ny Vokovoko Mena no isan’ireo komity mandray an-tanana ireo tra-boina. Nanolotra tranolay miisa folo izy ireo teny Mahamasina, omaly.
Fandaminana Velona ny fanoheran’ireo mpivarotra ny fampanarahan-dalàna eto Iarivo
Fihotsahana teny Avaradoha Trano telo potika nianjeran’ny bararata
Toetrandro Tombanana hikasika ny morontsiraka rahampitso alina ilay andro ratsy
Taratasin’ny fiara Fandaminana manokana ny fanoloana fahazoan-dalana hamily
Fihanaky ny valanaretina :: Natomboky ny Filoha tao Ambilobe ny fitsaboana kitrotro maimaim-poana
Toetry ny andro :: Tsy hahakasika an’i Madagasikara ireo rivo-doza roa arahi-maso
Ahiahy fanapoizinana Zaza mpirahavavy niaraka hita faty
Fanararaotana vehivavy malemy Zandary sandoka nanolana ny rafozam-baviny
Famonoana zaza tamin’ ny takon-kenatra Mpianaka nogadraina tamin’ny fahafatesan’ankizy efa-taona